अब म एमाले बनेँ, ओलीको पक्षमा देशभर घुम्छु : डा. सुरेन्द्र केसी — newsparda.com
शिर्षक अनुसारको कुरा भिडियोमा छ । कृपया भिडियो हेर्नुहोला ।।
माधव समूहबाट शिक्षामन्त्रीमा रामकुमारी झाँक्री र गोकर्ण बिष्ट रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रीमा !
काठमाडौं । गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले माधव नेपालकुमार समूहलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । नेपाल समूहकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले बिस्वासको मत लिए पछि त झनै नेपाल समुहलाई सरकारमा आउन निरन्तर भनिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्र, मधेष्बादी दल र नेपालसहितको टिम तयारीका साथ आगाडी बढेपछि नेता नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले नेता नेपालको निवासमा नै पुगेर सरकारमा सहभागीको लागि आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ ।
नेता नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई आफूहरु पार्टी एकताको लागि प्रयासरत रहेको र अहिले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने कुरा केही दिनपछि भन्ने जवाफ दिएका थिए । सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई विश्वासको मत दिएको नेता नेपाल समूहलाई ८ वटा मन्त्रालय दिने तयारी गरेको बताइएको छ ।
यदि नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भएमा घनश्याम भुसाल, भीम रावल, रामकुमारी झाँक्री, योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट लगायतका नेता मन्त्री अवश्य बन्छन् ।
नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भएमा शिक्षामन्त्री मन्त्री रामकुमारी झाँक्री नै हुने चर्चा पनि चलेको छ भने रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयमा गोकर्ण बिष्टको चर्चा छ । बिष्ट यो भन्दा अगाडीको मन्त्री परिषद्मा निकै उतृष्ट काम गरेका मन्त्री समेत हुन ।
यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रलाई दुई मन्त्रालय दिइसकेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री भइसकेका छन् ।